Ixabiso eliphantsi leManyano oMatshini oMbane oMandla oSahlulayo oMbane kunye neFektri | YiZheng
Yintoni isahluli sokuLunga esiTyebileyo esingamanzi esihlukanisiweyo?
Isixhobo sokhuselo lokusingqongileyo ukulungiselela ukungcoliswa kwamanzi emzimbeni weenkukhu. Iyakwazi ukwahlula ilindle eluhlaza kunye nelindle kunkunkuma yemfuyo iye kwisichumiso esingamanzi kunye nesichumiso esiqinileyo. Isichumisi esingamanzi singasetyenziselwa ukusetyenziswa kwesityalo emva kokuvumba, kwaye isichumiso esiqinileyo singasetyenziswa kwindawo yokungabikho kwesichumisi esinokuphucula ubume bomhlaba. Kwangelo xesha, inokwenziwa isichumisi esidityanisiweyo. Impompo yolwelo exhasayo isetyenziselwa ukuthumela amanzi omgquba kwasekuqaleni kwisahluli, kwaye izinto eziqinileyo (umgquba owomileyo) uyakhutshelwa ngaphandle kwaye wahlulwe nge-axis yomoya ebekwe kwiscreen, kwaye ulwelo luphuma ngaphandle kwindawo yokuphuma.
Ulwakhiwo lohlobo lweSieve oluThambileyo Sokwahlula okungamanzi okuqinileyo
Inkqubo ye- Utyekelo lokuSila Isahlukanisi esingamanzi esiqinileyo yenziwe ikakhulu ngesihlungulu, sokutsala into ngentambo spiral kunye blade spiral, ezenziwa ezikumgangatho ophezulu 304 steel stainless kunye ingxubevange emva kwenkqubo ekhethekileyo. Kuye nokumelana elungileyo kwaye banxibe ukuxhathisa. Inamaxesha ama-2-3 okuphakanyiswa kwenkonzo xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo.
Iimpawu zeCandelo lokuThoba okuLumkileyo okuThoba okuLoo ulwelo
Umsebenzi wokubekwa kwesisefu esityebileyo se-ulwelo ulwahlulo lugqibeleleyo kwaye kujoliswe kulo. Uyilo lonke lomatshini ludibanisa inkqubo yokumpompa umgquba, inkqubo yokungcangcazela, inkqubo ye-extrusion kunye nenkqubo yokugungxula okuzenzekelayo, ephucula amandla onyango kunye nefuthe lonyango.
1. Sisizukulwana esitsha sokulahla inkunkuma kwezixhobo zokukhusela indalo.
2. Ukuphatha ngokufanelekileyo inkunkuma evela kwimfuyo nakwiifama zeenkukhu ngenjongo yokwahlula ulwelo oluqinileyo.
Izinto eziluncedo zokuThoba okuCociweyo okuCwangcisiweyo okungafaniyo nolwelo
I-1.Ilinomsebenzi wokuhlela nokucoca iziqwenga ezinkulu kuqala, kwaye idibanisa imisebenzi emininzi njengokuhambisa, ukucofa, ukomisa amanzi kunye nokususa isanti ukusombulula iingxaki zezixhobo zokubopha inkunkuma kunye nokusebenza komoya
2.Izinga lokwahlula izinto ezidadayo, ezixhonyiweyo kunye neentsika zenkunkuma zingaphezulu kwe-95%, kwaye umxholo oqinileyo wenkunkuma ungaphezulu kwe-35%.
Inomsebenzi wokulawula amanqanaba okuzenzekelayo, ogcina ngaphezulu kwe-50% yokusetyenziswa kwamandla kunezixhobo ezifanayo, iindleko zokusebenza eziphantsi.
I-4.Isixhobo sezixhobo ekunxibelelaneni nomatshini wokulungisa senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu kwaye sigqitha ngokukhetha.
Ukuthambekisa ukuLinga ukuSombulula isiQinisekiso seVidiyo seVidiyo
Ukutyekela ukuLinganisa iiMali eziManzi eziSahlulayo eziKhethiweyo
Iiparameter ezisisiseko zezi zilandelayo:
Egqithileyo Umatshini wokuGcina isichumiso esimileyo
Okulandelayo: Imveliso yemveliso yezichumiso eziphilayo